Suldaanka guud ee Beelaha Somaliland oo sheegay in maamulka Somaliland Xamar la’aanteed waxba noqon karin |
Suldaanka guud ee Beelaha Somaliland oo sheegay in maamulka Somaliland Xamar la’aanteed waxba noqon karin
Suldaanka guud ee Beelaha Somaliland Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir, ayaa shaaca ka qaaday inaanay Somaliland wax kasta oo ay samayso iyo gooni-isu-taag kasta oo ay u durbaan-tunto ka maarmi karin midnimada Soomaaliyeed iyo inay qaadato nidaamka federaalka ah ee Soomaaliya ka socda.
Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir waxa uu ka sheekeeyey taariikh dheer oo illaa xornimadii iyo midnimadii Soomaaliya uu kagaga sheekeeyey. Waxa kale oo uu ka sheekeeyey maamuladii kala dambeeyey ee Somaliland soo martay tan iyo markii lagu dhawaaqay gooni-isu-taagga Somaliland 18/May/ 1991-kii. Isaga oo sheegay in caddaalad-darro badani ka jirto dhulka Maamulka Somaliland ka taliyo meelo badan oo ka tirsan.
“Calankani wuxuu ku dhamaystirmi karaa waxaynu dafirsanahay ama xukuumaddeenu diidan tahay waa marka aynu runta ku wada hadlayno, haddii aan miiska wadahadalka la isugu iman wax aynu gooni u goosan karnaa jiri-mayso, shuruudaa jira, qoraalo iyo heshiisyo ayaa jira, adiga ayaa maanta lagaa rabaa inaad shuruuddii la timaado oo aad xukunto ciddii 53-kaa sanadood ku xukumaysay.” Sidaa ayuu yiri Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir oo shalay hadal ka jeediyey magaalada Sallaxlay oo ah degmo ka tirsan gobolka Maroodi-jeex oo uu dadweynaha ku dhaqan oo xusayey 18 May hadal u jeediyey.
Suldaanka oo hadalkiisa sii wataa waxa uu intaa ku daray oo uu yiri; “Maaha inaynu cidlo uun durbaan ka garaacno, haddii aan u soo noqdo maamulka Somaliland, wax alaale iyo wax ay u qabatay beelaha Somaliland ma jirto ilaa maantana biyaha ayaa dhabarka lagu dhaameeyaa oo biyo malaha, dadna biyihii dadka ka dhexeeyay ee maalinba xaafad loo furayey ayay ka dhargeen, dadna jirikaamadii Dulcad iyo Kaam-abokor ayay sidii u sidaan.”
“Waxaan leeyahay Xamar waanu ka go’nay hadal maaha, anigu been idiin sheegi maayo, miyeynu ka maarmaynaa Xamar, Ganacsatadeenii Xamar-bay tagaysaa, kuwoodii Hargeysa ayay imanayaan, saraha (Fooqyada) ugu dhaadheer Hargeysa waxa leh niman Hawiye ah, markaa waxa miiska wadahadalka loo diidayaa inyar ayuunbaa doonaysa inay nimcada cunto, taasina wax umaddu ku dhaqmi karayso maaha.”ayuu yidhi Suldaan Maxamed.
Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir mar uu ka hadlayey sababta Calanka maamulka Somaliland meel u gaari la’yahay waxa uu yiri; “Calankani wuxuu ku dhamaystirmi karaa waxaynu dafirsanahay ama maamulkeenu diiddan tahay waa marka aynu runta ku wada hadlayno, haddii aan miiska wadahadalka la isugu iman wax aynu gooni u goosan karnaa jiri-mayso, shuruudaa jira, qoraalo iyo heshiisyo ayaa jira, adiga ayaa maanta lagaa rabaa inaad shuruuddii la timaado oo aad xukunto ciddii 53-kaa sanadood ku xukumaysay, maaha inaynu cidlo uun durbaan ka garaacno, haddii aan u soo noqdo Somaliland.
“Wax alaale iyo wax ay u qabatay beelaha Somaliland ma jirto ilaa maantana biyaha ayaa dhabarka lagu dhaameeyaa oo biyo malaha, dadna biyihii dadka ka dhexeeyay ee maalinba xaafad loo furayey ayay ka dhargeen, dadna jirikaamadii Dulcad iyo Kaam-abokor ayay sidii u sidaan, waxaan leeyahay Xamar waanu ka go’nay hadal maaha, anigu been idiin sheegi maayo, miyeynu ka maarmaynaa Xamar.”
Waxa uu Suldaan Maxamed sheegay in Ganacsatada Somaliland aanay marnaba ka maarmi karin Xamar waxaanu yiri; “Ganacsatadeenii Xamar-bay tagaysaa, kuwoodii Hargeysa ayay imanayaan, saraha (Fooqyada) ugu dhaadheer Hargeysa waxa leh niman Hawiye ah, markaa waxa miiska wadahadalka loo diidayaa inyar ayuunbaa doonaysa inay nimcada cunto, taasina wax umaddu ku dhaqmi karayso maaha.”